Ulapha: ikhaya » Incoko kunye neNeopopsychological glossary
Indawo yokuhlala ngelizwi: Umkhwa wokuthethaUMarini et al., BVL 4-12, 2015: 37).
I-aphasia engekhoyo: [aphasia] I-Aphasia ibonakaliswa yimveliso engekho mgangathweni, izivakalisi ezifutshane, ubunzima bokubhala, i-prosody eyonakalisiweyo; kunokubakho i-agrammatism. Iikhrayitheriya zokwahlula umtyibilikisi kwi-aphasia engadibaniyo nobukho: ubukho be-apraxia yomlomo, ubude besivakalisi, inani lentetho, ubungakanani be-agrammatism okanye isangqala kunye neprosody. Ngokubanzi, ubukho be-apraxia yomlomo kunye nobude besivakalisi ziqwalaselwe ngaphezulu kwayo yonke: ukuba akukho zivakalisi zinamagama amathandathu ubuncinci (ubuncinci isivakalisi esinye kwishumi) ihlala i-aphasia engekho rhabaxa (I-Basso, ukwazi kunye nokufundisa kwakhona i-aphasia, i-2009: 64).
Afemia: [aphasia] Ikota yokuqala yento eza kubizwa kamva aphasia, eyenziwe nguPaul Broca ukuchaza abo bangakwaziyo ukuzithetha ngamazwi nangona benolwazi olululo.
AffricazioneInkqubo [yolwimi] Inkqubo yenkqubo: Ukufakwa endaweni yesandi esimanyumnyezi kunye nesichazayo. Umzekelo: "i-cagia" ye "ikhaya" (cf. Inqaku lethu kwiFonetiki kunye neFonology)
I-AnteriorizzazioneInkqubo [yolwimi] Inkqubo yenkqubo: Ukubuyiselwa kwesandi sangasemva kwesangaphandle. Umzekelo: "tasa" nge "khaya" (cf. Inqaku lethu kwiFonetiki kunye neFonology).
aposiopesis: [ulwimi] Ukuphazamiseka ngokukhawuleza kwesivakalisi esingahambeli phambili. Njengomfanekiso ophumelelayo, yenzelwe ukuvumela umfundi okanye umphulaphuli ukuba aqikelele esinye isivakalisi. Kwimeko ye-aphasias, nangona kunjalo, ihlala isisiphumo esingazenzisiyo sokungakwazi ukuqhubeka ngenxa yobunzima ekwakhiweni kwesivakalisi okanye iingxaki zokufumana kwakhona ikota.
I-Optic ataxia: [i-neuropsychology] intswelo yokulungelelanisa okubonakalayo okubandakanya ukufikelela kwiimpazamo ngomlenze ukuya kwinto ebonakalayo. Ihlala ibangelwa kukulimala kobuchopho kwindlela yokubonakalayo dorsal. Ayisixhomekekanga kwinto eyonakeleyo ekufikeleleni kuyo kwaye iqondwe, nangona kunjalo ukunxibelelana nayo kwinqanaba leemoto kunzima (jonga nako ILadàvas neBerti, iNqaku leNeuropsychology, ka-2014).
I-Cactual Bilingualism (okanye iilwimi ezininzi): [ulwimi] xa iilwimi ezimbini zifundwe ngaxeshanye (bona Marini ne Ukuphazamiseka kolwimi, 2014: 68)
Iilwimi ezimbini eziLungelelanisiweyo (okanye ubuninzi bezinto) [ulwimi] xa iilwimi ezimbini okanye ezingaphezulu zifundwe ngaphambi kokufikisa kodwa hayi kwisangqa sosapho (umz. ukuhambisa) (bona Marini ne Ukuphazamiseka kolwimi, 2014: 68)
Ukusetyenziswa kweelwimi ezimbini (okanye ubuninzi): [ulwimi] xa kusetyenziswa ulwimi olunye okanye ezingaphezulu kusetyenziswa ulwimi lokuqala njengommeli (bona Marini ne Ukuphazamiseka kolwimi, 2014: 68)
Ukusetyenziswa kweelwimi ezimbini kwangoko: [ulwimi] xa umntwana evulelekile kulwimi lwesibini emva kolokuqala, kodwa nakweyiphi na imeko phambi kweminyaka yobudala esibhozo (jonga Marini ne Ukuphazamiseka kolwimi, 2014: 68)
Ukulandelelana kabini kolungelelwaniso: [ulwimi] xa umntwana evulelekile kulwimi lwesibini emva kolokuqala, kodwa emva kweminyaka esibhozo (jonga Marini ne Ukuphazamiseka kolwimi, 2014: 68)
Iilwimi ezimbini ngaxeshanye: [ulwimi] xa umntwana evulelwe iilwimi ezimbini ukusukela kwiintsuku zokuqala zobomi (jonga Marini ne Ukuphazamiseka kolwimi, 2014: 68)
Isigwebo sophatho (okanye ibinzana lenkxaso): ibinzana elisetyenziswa rhoqo elinokuthi lisetyenziselwe ukufumana amagama athile (umzekelo: "Nceda undinike ...").
circumlocution: [ulwimi] ukusebenzisa "ukuguqulwa kwamagama" ukubhekisa kwigama elinokuphinda lifumaneke (rhoqo kakhulu kwi-aphasias). Umzekelo: "oza kusika isonka" athi "akhonto".
Isakhono sokupela: [ukufunda] ukukwazi ukuhlonipha imigaqo-siseko kunye nezivumelwano ezikhoyo kulwimi lwethu lwangoku eziguqula ukuguqulwa kolwimi kumamkelwe okanye kucingwa kulwimi oluvakaliswa ngoographhemes (Tressoldi noCornoldi, 2000, Ibhetri yokuhlola ubuchule bokubhala kunye nopelo kwizikolo ezinyanzelekileyo)
Unxibelelwano olusebenzayo kunye nolunye unxibelelwano (CAA)naluphi na unxibelelwano olubuyisela okanye olonyusa ulwimi ngentetho; yindawo yokuziqhelanisa neklinikhi efuna ukubuyekezela ukukhubazeka kwethutyana okanye ngokusisigxina kwabantu abaneemfuno zonxibelelwano ezinzima (ASHA, 2005, ikhankanywe ku UConstantine, Wakha iincwadi kunye namabali nge-CAA, ngo-2011: 54)
Imeko zokuhambisa izinto: [aphasia] ukuzama ukusondela kwigama ngokuqalisa kobuxoki okanye ubuchwephesha bobuchwephesha. Umzekelo: "la pa ... pasca, pasma, pastia ..." ukuze uthi "pasika" (jonga umzekelo IMarini, iNeurolinguistics Manual, ngo-2018: 143 e I-Mazzucchi, ukuvuselelwa kwe-Neuropsychological, ngo-2012)
ingxoxo: [I-neuropsychology] kwimeko yokuphazamiseka kwememori luphawu "oluhle" olucwangcisiweyo njengokuqulunqwa okuzenzekelayo kwengxelo okanye iintshukumo ezingahambelani nemvelaphi okanye eyadlulayo, imeko yangoku okanye yexesha elizayo lesifundo (Ukusuka kwiindevu, G. (1993b). Iipatheni ezahlukeneyo zokuhlangana. Cortex, 29, 567-581) -bulela u-Ilaria Zannoni
mufflingInkqubo [yolwimi] Inkqubo yenkqubo: Ukutshintsha kwesandi kunye nesithulu esihambelanayo. Umzekelo: "panana" we "banana" (cf. Inqaku lethu kwiFonetiki kunye neFonology)
dysgraphia: [ukufunda] ukubhala ngobunzima, ngaphandle kokuchazwa kukuphazamiseka kwengqondo okanye umda wokuqonda (i-Ajuriagu ter et al., L'écriture de l'enfant. 1 °. L'evolution del'écriture et ses hardes, 1979 cit .n UDi Brina et al., BHK, 2010)
Isiphumo sokulindelekileyo: [izibalo] zotshintsho lweziphumo zophando ngenxa yokulindela iziphumo ezikhulisiweyo ngumphandi okanye zizifundo zovavanyo ngokwazo. Ichazwe okokuqala ngugqirha wezengqondo uRobert Rosenthal ngoko ke kwezinye iimeko kuthiwa Isiphumo seRosenthal (okanye nokuba Iziphumo zePygmalion o isiprofetho esizalisayo). Yinto ebaluleke kakhulu ukuba uyiqwalasele kuphando apho isiphumo somntu siyinto emiselweyo kwaye ngenxa yesi sizathu isiphumo esi sidla ngokubizwa ngokuba yinto ebaluleke kakhulu kwizifundo kwiziphumo zonyango ezingasebenzisi iqela elilawulayo elisebenzayo (okt uzinikeleyo kunyango okanye ngenye indlela yophando) okanye engasebenzisi naliphi na iqela lolawulo.
Iziphumo zeMeko: [ukufunda] bona Ithiyori yenkcubeko yokufunda kweMultimedia
Isiphumo sePygarmion: vedi Iziphumo zokufunda
Isiphumo sendawo: [isayikholoji, amayeza] ukuphuculwa okunikwa ngonyango ngaphandle kweziphumo ezithile kwaye kudityaniswa nokuthenjwa okubekwe kunyango ngokwalo. Iziphumo, ngokufanayo kwiIsiphumo sokulindelwa, ihlala isisithintelo kuphando ngeziphumo zonyango kwaye igcinwe iphantsi kolawulo kusetyenziswa amaqela ezifundo, ezibizwa ngokuba zezazo amaqela olawulo, apho kungekho nyango lwenziwayo okanye olwenziweyo olubuxoki
Isiphumo sokungafani kwakhona: [ukufunda] bona Ithiyori yenkcubeko yokufunda iMultimodal
mazwi: [ulwimi] ngokuxhomekeka kwisikhombisi esisetyenzisiweyo, inokuchazwa ngokuthi "ukuphuma kwesandi phakathi kokuphumla okubambekayo (okugcwele okanye okungenanto) okuhlala ubuncinci imizuzwana emibini" (isikhombisi sendlela yokulinganisa), "ibhloko yeengcinga eziqinisekileyo, okanye icebo elilula okanye elinzima" ( Isinxibelelanisi semantic), "isivakalisi esikhulu esilandelwa luchungechunge lwababumbileyo abenziwe kakuhle" (igrama yomgaqo). (UMarini et al., BVL 4-12, 2015: 69)
Chwetheza impazamo yam: [I-psychometry] iyala into engeyonyani xa iyinyani le.
Umzekelo: umphandi ucinga ukuba unyango olutsha lolwimi luyaziphucula iinkalo zephonono ngcono kunonyango lwesiqhelo; emva kokuvavanya i-hypothesis, iyala i-H0 (i.e. ukuba iindlela ezimbini zonyango zilingana) kwaye yamkela i-H1 (i.e. ukuba unyango olutsha lungcono) kodwa ngokwenyani zonyango ezimbini zinika iziphumo ezifanayo kwaye umahluko ofunyenweyo unxulumene iimpazamo zendlela yokusebenza okanye isiphumo sethuba (jonga kwakhona UWeltkovitz, uCohen kunye no-Ewen, Izibalo zezeNzululwazi zeZokuziphatha, ngo-2009).
Uhlobo lweempazamo zohlobo lwesibini: [I-psychometry] yamkela into engekhoyo xa oku kububuxoki.
Umzekelo: umphandi ucinga ukuba unyango olutsha lolwimi luphucula iinkalo zephonono ngcono kunonyango lwesiqhelo; emva kokuvavanya i-hypothesis, yamkela i-H0 (i.e. ukuba iindlela ezimbini zonyango zilingana) kwaye iyala i-H1 (i.e ukuba unyango olutsha lungcono) kodwa ngokwenyani zonyango ezimbini zinika iziphumo ezahlukeneyo. Ukunqongophala kweziphumo kule meko, kwelinye icala, kuya kuxhomekeka kwiimpazamo zendlela, amanqaku atshintshisanayo omncinci ngenxa yesiphumo secala, okanye ngenxa yamandla aphantsi ovavanyo lobalo (jonga kwakhona UWeltkovitz, uCohen kunye no-Ewen, Izibalo zezeNzululwazi zeZokuziphatha, ngo-2009).
Iifilm: [i-aphasia] ikhefu epheleleyo eyenziwe zizandi, iiphoneemes, iisilayidi okanye iziqwenga zamagama. Bafumaneka ubukhulu becala kubuqali bobuxoki. "Ewe namhlanje lusuku oluhle" (jonga umzekelo IMarini, iNeurolinguistics Manual, ngo-2018: 143)
phonology: [ulwimi] Uqeqesho olufundisisa ubuchule befonetiki enokuthi isithethi sibe nalo ngolwimi lwenkobe, oko kukuthi, inkqubo ephuculayo kwiminyaka yobomi bomntu kwaye apho kusekwe khona umahluko phakathi kwezandi ezahlula intsingiselo kunye nezandi musa ukwahlula (Nespor, phonology, 1993: 17)
Ibinzana elinombala: [ulwimi] Indlela yokudibanisa umbala owahlukileyo kunye nesixhobo ngasinye sesivakalisi (inqaku, umxholo, isenzi ...). Inokusetyenziselwa zombini izivakalisi ezibhaliweyo kunye nezo zenziwe ngee-pictographs (bona, umzekelo, I-AA VV, i-protocol yonyango lwentetho ye-De Filippis, ka-2006).
I-FricazioneInkqubo [yolwimi] Inkqubo yenkqubo: ukutshintshwa kwesandi esidibanisayo okanye esidibeneyo ngesiphazamiso. Umzekelo: "i-" fasso "ye" nyaniso "(cf. Inqaku lethu kwiFonetiki kunye neFonology)
Functors: [ulwimi] vd. Vula kwaye uvale amagama eklasi
endizaInkqubo [yolwimi] Inkqubo yenkqubo: Ukufakwa endaweni kweekhonsonon. Umzekelo: "foia" ngo "gqabi" (cf. Inqaku lethu kwiFonetiki kunye neFonology)
Isenzo seBatonicUhlobo lokuthambekela apho izandla zishukuma ukusuka phezulu ziye ezantsi ukumakisha uluhlu lwamagama okanye amagama esivakalisi (kwindima yezimbo zomzimba ezibonakalayo. Isiseko sonyango lokuthetha kwinqanaba lokukhula, iphe. 234)
Ukulimala kobuchopho obuBi kakhulu: [I-neurology]: "Ukulimala kwengqondo okufunyenwe ngokuqatha" (GCA) kubhekisele kumonakalo wobuchopho, ngenxa yoxinzelelo lwe-cranioencephalic okanye ezinye izizathu (ubuchopho be-brain, hemorrhage, njl.njl.), njengokuchaza kwemeko yomhlaza (GCS = / < I-8 ngaphezulu kweeyure ezingama-24), kunye ne-sensorimotor, ukuphazamiseka kwengqondo kunye nokuziphatha, okukhokelela ekukhubazekeni okukhulu (cf. INkomfa yoGunyaziso: Ukuziqhelanisa nokulungileyo kweKlinikhi yokuBuyiselwa esiBhedlela kwabantu abanobunzima obufumeneyo).
Ukuphazamiseka kwimoto eyaziwayo: [I-neuropsychology, multiple sclerosis] into eyenzeka ngexesha elinye lokuqhutywa komsebenzi weemoto (umzekelo ukuhamba) kunye nomsebenzi wengqondo (umzekelo, onke amagama aqala ngoonobumba abanikiweyo); kwezi meko kunokwenzeka ukubona unciphiso kwimoto, ingqondo okanye ukusebenza zombini. Ukuphazamiseka kwengqondo kwimoto kufundwa ngakumbi kwimeko yesifo se-sclerosis ezininzi njengoko kusenzeka rhoqo kwaye kuphawuleka ngakumbi kunokwabantu abaphilile. (Bona iRuggieri et al., 2018, Imephu yesophawu ye-lesion yokuphazamiseka kwengqondo-yasemva kokuphazamiseka kwisifo sokuqina kwesifo).
Ukudityaniswa kwemodyuli: [I-neuropsychology] into enento yokudibanisa ulwazi olusuka kwiindlela ezahlukeneyo zemvakalelo kwimbono enye. Ngokuchanekileyo, umbono oquka unxibelelwano phakathi kweendlela ezimbini okanye ezingafaniyo zemvakalelo (https://en.wikipedia.org/wiki/Crossmodal).
Ithuba lokungqina [psychometry] luluhlu lwamaxabiso phakathi kwemida emibini (ngezantsi nangaphezulu) ngaphakathi apho kufumaneka iparameter ethile (ngokuzithemba).
Umzekelo: ukuba emva kokuba ndikhuphe i-WAIS-IV i-IQ ye-102 kuvela isithuba sokuzithemba malunga ne-95% phakathi kwe-97 ne-107, oku kuthetha ukuba kuma-95% amathuba okuba i-IQ yinyani ye-IQ yomntu ophononongiweyo lixabiso eliphakathi kwe-97 kunye ne- 107 (jonga kwakhona UWeltkovitz, uCohen kunye no-Ewen, Izibalo zezeNzululwazi zeZokuziphatha, ngo-2009).
Enye into: [I-psychometry] ikwaboniswa nge-H1. Kwindawo yophando yintsingiselo ye-hypothesis eyenziwe ngumphandi nenjongo yokuvavanywa.
Ukuba, umzekelo, umphandi uqinisekile ukuba lolunye unyango lunika iziphumo ezahlukileyo kunendlela eqhelekileyo, uH1 uya kubonisa ubukho phakathi kwala mahluko mabini.
Kukwachazwa njengokuya kuthi ga ngoku ngokuba yi-null hypothesis ibubuxoki, ikwacacisa amaxabiso ngexabiso elinikiweyo lenzala (jonga nako UWeltkovitz, uCohen kunye no-Ewen, Izibalo zezeNzululwazi zeZokuziphatha, ngo-2009).
I-hypothesis ye-Null: [I-psychometry] ikwaboniswa nge-H0, kwicandelo lophando libhekisa kwimibono ethathwa njengeyinyani xa kungekho bungqina buchasene obunokubuphikisa.
Ukuba, umzekelo, yenzelwe ukubonisa ukuba unyango lunye lusebenza ngakumbi kunolunye, i-H0 iyakumela u-hypothesis wokuba akukho mahluko phakathi kolu nyango limbini.
Ubungakanani obuPhakathi beNkcazo (i-LME): [[ulwimi] Yaziswa nguBrown ngo-1973, ingcaciso yexesha elichanekileyo lesivakalisi ibonisa umndilili wamagama okanye isimilo esiveliswe sisithethi kwisampula- ihlala - izivakalisi ezili-100 (jonga ingxelo). Yenye yezalathiso zobuchule bolwimi kwimveliso (bona, uBrown, Ulwimi lokuqala, ngo-1973).
Ithiyori yeMaphu: [aphasia] Hypothesis ngokokuba abaguli bamadrammatic, ngelixa begcina ubuchule obuhle be-syntactic, baba nobunzima ekuboneleleni iindima eziyimigangatho yabantu abasebenza isivakalisi kwisakhiwo sempikiswano kwisimo sesenzi (jonga iBoscarato neModena kwi UFlosi, uCharlemagne kunye neRossetto, LUkulungiswa ngokutsha komntu one-aphasia, 2013: 57)
Unyango lweMelodic Intonation Therapy (MIT): [i-aphasia] indlela yokuvuselela i-aphasia exhaphaza iinkalo ze-melodic zentetho (isiculo kunye nesingqisho) ngokuvuma (jonga uNorton et al., Unyango lweMelodic, 2009)
Inkumbulo yokujonga: [i-neuropsychology] ukukhumbula ukwenza isenzo emva kokucwangcisa (bona umzekelo, URouleau et al. Ukuchaphazeleka okukhunjulwayo kwememori kwisifo se-sclerosis ezininzi: uphononongo, ngo-2017). Jonga inqaku lethu elibanzi Imemori yokujonga kwisifo sokuqina kwesifo esiqhelekileyo
I-Metafonologia: ukukwazi ukuthelekisa, icandelo kunye nokucalucalula amagama aziswe ngomlomo kwisiseko sefonological yazo (Ubhishophu kunye nokubhabha kweqhwa, ukudodobala koqoqosho kunye nokukhubazeka kolwimi oluthile: ezifanayo okanye ezahlukileyo?)
Iigrons neurons: [I-neuroscience] udidi lwee-neurons ezenziwa zenziwa zombini xa umntu esenza isenzo kwaye xa umntu elawula isenzo esinye esenziweyo sesinye isifundo (https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio)
holophrasis: [ulwimi] kusetyenziswa igama elinye kwingxelo okanye isicelo esiya kufuna isivakalisi sonke. Yinto eqhelekileyo ukukhula kolwimi emntwaneni. Ex: "cua" ka "ndifuna amanzi".
paraphasia: [aphasia] igama liveliswe ngokungalunganga ngokubhekisele kwithagethi. IParaphasia inokuba sisandi (umzekelo: "libbium" ye "ncwadi") okanye isemantic ("incwadana yokubhala" ye "ncwadi"). (bona umzekelo IMarini, iNeurolinguistics Manual, ngo-2018: 143)
Vula kwaye uvale amagama eklasi: [ulwimi] amagama eklasi evulekileyo (okanye Umxholo wamagama) Izibizo, izichazi ezifanelekileyo, izihlomelo ezilandelelanayo kunye nezihlomelo eziphelisa u-in -mente; amagama eklasi avaliweyo (okanye Umsebenzi wamagama o functors) Izimelabizo, izichazi ezingafanelekanga, amanqaku, izihlanganisi, izincedisi kunye neesenzi zemodyuli. Ngelixa umxholo wamagama uhambisa iikhonsepthi ze-semantic, abonwabisi baveza ubudlelwane phakathi kwamagama.
Uhlalutyo lweeNxalenye zeFonotiki: [aphasia] indlela ecetywayo ULeonard, uRochon noLaird (ngo-2008) equlathe ukwazisa isigulana ngomfanekiso embindini wephepha lesicelo sokubuyiswa kwegama elichongiweyo. Nokuba waphumelela kangakanani na, isigulana sicelwa ukuba sibuyisele kwakhona isigama esinemvano-siphelo, ifonim yokuqala, elinye igama eliqala ngoonobumba abafanayo kunye nenani lamagama. (jonga iBoscarato kunye neModena kwi UFlosi, uCharlemagne kunye neRossetto, LUkulungiswa ngokutsha komntu one-aphasia, 2013: 47)
Amandla ovavanyo lwe Statist: [isayikholojikelele] kuthetha ukuba kuyakwenqatshwa i-null hypothesis, ngovavanyo lwamanani, xa oku kuyinyani.
Umzekelo: ukuba uvavanyo oluthile olunesayizi ethile yesampula inamandla okubala angama-80%, oku kuthetha ukuba kukho amathuba angama-80% okufumana idatha esenza ukuba siyenqabe i-null hypothesis, ngokuxhomekeka ekubeni oku bubuxoki (jonga kwakhona UWeltkovitz, uCohen kunye no-Ewen, Izibalo zezeNzululwazi zeZokuziphatha, ngo-2009).
Ukukhuthaza ukusebenza ngempumelelo konxibelelwano kwe-Aphasics (PACE) : [aphasia] indlela engaginyisi mathe kunyango lwe-aphasia apho ugqirha othethayo achonga zonke iindlela ezinokubakho zokuqinisekisa ukomelela konxibelelwano lwesigulana (jonga ukujongwa ngamaXilongo ku UFlosi, uCharlemagne kunye neRossetto, LUkulungiswa ngokutsha komntu one-aphasia, 2013: 105 e I-Charlemagne, indlela yePragmatic kunyango lwe-aphasia. Ukusuka kwiimodeli zokubonisa amandla kwiindlela zePACE, ngo-2002)
Amanqaku oMgangatho: [Psychometry] amanqaku asetyenziswe kwiimvavanyo ezininzi (umzekelo kwi BVN 5-11) ezineepropathi ezifanayo ne-IQ (jonga kwanezifundo zeengqondo).
Unyango lwe-Reality Oriental Therapy (ROT): [I-neuropsychology] Unyango olunenjongo ephambili kukuphucula ukujongisisa ixesha, endaweni kunye nokuzibhekisa ngokwakho. Kukho iROT esesikweni (ichazwe kakuhle intlanganiso yeentlanganiso) kunye neROT engekho mthethweni, ephunyezwa ngabasebenzi abangaqeqeshwanga imini yonke. (UGollin, uFerrari, uPeruzzi, Indawo yokuzivocavoca ngengqondo, 2007: 13)
Unyango oluncitshisiweyo lwe-Syntax (REST): [aphasia] Unyango lwezigulasic agasmic abaguli, endaweni yokugxila kwimveliso yezivakalisi ezichanekileyo ezichazayo, bavumela ukusetyenziswa kwezixhobo ezenziwe lula ezifana nezo zisetyenziswe colloqu ngokukhethekileyo ngezifundo eziqhelekileyo (ezicetyiswa ngu Springer et al., 2000; vd. IBass, Yazi kwaye uphinde ufundise i-aphasia, ngo-2009: 35)
Uhlengahlengiso [unyango lwentetho]: Ubuchule obuquka ukuphindaphinda into ethethwe ngumnxibelelanisi ishiye intsingiselo ingaguqukanga kodwa ukubonelela ngemodeli efanelekileyo ngokudibanisa igama elilahlekileyo okanye ukufaka igama endaweni efanelekileyo kunye nelinye elifanelekileyo (ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe jonga "ubuchule bongenelelo" ku Isiseko sonyango lokuthetha kwinqanaba lokukhula, iphe. 235)
Icandelo leSizwe elingafunyanwanga (SFI): [ulwimi] (okanye isilabhabha, okanye iiproshomorphemic fillers) zimi kwindawo esisigxina kwisiteyitimenti kwaye mhlawumbi ziyafezekisa indima "yamanqaku isikhundla" yezinto ezisebenzayo (Bottari et al., Ukuthotyelwa kolwakhiwo ekufumaneni i-morphology yasimahla yase-Itali, Ngo-1993, icatshulwe kwi: Ripamonti et al., I-Lepi: Ulwimi oluchukumisayo kwasebuntwaneni, 2017)
Uhlalutyo lweNqaku leSemantic: [aphasia] indlela ecinga ukuba ukubuyiswa kolwazi oluqinisekileyo lwenzeka ngokufikelela kuthungelwano lwe-semantic ngokwe-hypothesis yokuba ukusebenza kweempawu ze-semantic zenjongo kufuneka kusebenze kwithagethi ngokwayo ngaphezulu komgangatho wayo, ukuqhuba ukubuyiswa kwelizwi, kunye nefuthe lokujolisa kwezinye izinto ekujoliswe kuzo ezabelana ngeempawu ezifanayo zentsomi (jonga iBoscarato neModena kwi UFlosi, uCharlemagne kunye neRossetto, LUkulungiswa ngokutsha komntu one-aphasia, 2013: 44).
Ubunzulu bovavanyo: [izibalo]: amandla ovavanyo lokuchonga izifundo ezinesimo esithile (isimilo sokwenyani), umzekelo ubukho be-dyslexia. Ngamanye amagama, luludwe lwezifundo abathi, ngovavanyo, bavavanye ukuba nenani elibonakalayo xa kuthelekiswa itotali yezifundo abanayo; Ukuthatha umzekelo we-dyslexia kwakhona, uvakalelo luxabiso lwezifundo abathi kuvavanyo oluthile dyslexic, xa kuthelekiswa itotali yokoqobo.
Ukutshintsha kwengqondo: [I-neuropsychology] Ukutshintsha kwengqwalaselo kugxilwe kwinto enye, okanye umcimbi, uye kwelinye, zombini ziqulathwe kwimeko engqonge isifundo (UMarzocchi, uMolin, iPoli, uNonophelo kunye neMetacognition, 2002: 12).
I-Cerebellar Cognitive-Affective Syndrome: [i-neuropsychology] ukuvumisa kwengqondo kwengqondo kunye neziphene ezinokubangela isiphumo se-lesion ye-cerebellum. Ukusilela kunokuba kuninzi kwaye kuxhalabe kwimimandla emininzi enje ngememori yokusebenza, ulwimi, imisebenzi elawulayo, ukungafakwanga kunye nokufunda kwenkqubo, ukulungiswa kwesithuba, ukulawulwa kwengqwalaselo, ulawulo oluhambelana nokuziphatha (i-Schmahmann, Iswekilepatum kunye nengqondo, 2018).
Isidibanisi sokudakumba: [i-neuropsychology] ulungelelwaniso lwengqondo olunxulumene nesibindi semithwalo yento emhlophe edibanisa iindawo ezahlukeneyo zobuchopho (jonga kwakhona I-Doron, iParot kunye neDel Miglio, Isichazi-magama esitsha seS Psychology, 2001).
soundInkqubo [yolwimi] Inkqubo yenkqubo: Ukufakwa endaweni yesandi esisithulu ngesandi esihambelanayo. Umzekelo: "bane" ngo "sonka" (cf. Inqaku lethu kwiFonetiki kunye neFonology).
Ukucaciswa kovavanyo [izibalo]: amandla ovavanyo lokuchonga izifundo ezingenazimpawu ezithile (izinto eziyinyani), umzekelo ukungabikho kwengqondo. Ngamanye amagama, luludwe lwezifundo abathi ngovavanyo lungaqinisekanga ukuba lilo elibonakalayo xa kuthelekiswa itotali yezifundo ezingabinayo ngokwenene; Ukuthatha umzekelo wokuwohloka komqondo kwakhona, ukucaciswa sisiqingatha sezifundo ezinempilo (ngaphandle kwesifo sengqondo esixhalabisayo) kuvavanyo oluthile, kuthelekiswa itotali yabo baphilile ngokwenene.
stereo: [isayikholojisti] Ngokuphindaphindiweyo ngokuziphatha kwakhona kodlulileyo Zingaba zeentlobo ezahlukeneyo: iimoto, kunxibelelwano olubhaliweyo okanye oluthethwayo, kwimidlalo, ngokuzoba, njl njl. (jonga kwakhona Galimberti, Isichazi-magama esitsha seS Psychology, 2018).
Isulcus glottidis: [ilizwi] Ukwenzakala okubangelwa kukutshixeka kwe-mucosa yentambo yelizwi edala i-sac engena kwindawo kaReinke. Kukholelwa ukuba kungenxa yokuvuleka okuzenzekelayo kwe-cyst ye-cyst kwiminyaka yokuqala yobomi (cf. IAlbera neRossi, iOtolaryngology, 2018: 251).
Ithiyori eyaziwa ngokuba yiMultimedia Learning okanye i-C Petros: [ukufunda] ithiyori ebona ubukho beziteshi ezi-mbini zokufunda, enye ebonakalayo kunye noluhlu olunye, nganye inomda omncinci (izinto ezi-3 okanye ezi-4 ngexesha). Ulwazi oluninzi olwahlukileyo lungaphononongwa, kwaye ke lufundiwe, ukuba lwahlulahlulwe zitshaneli zozibini (ezibonakalayo kunye nophicotho) endaweni yesitayile esinye (umzekelo, isicatshulwa esibhaliweyo nemifanekiso); le ibizwa imowudi yesimo
vergeture: [ilizwi] uxinzelelo lomda osimahla wentambo yelizwi ngokunamathela kwe-mucosa kwi-ligal yelizwi (cf. IAlbera neRossi, iOtolaryngology, 2018: 251)